Dhipatimendi reAg rinopa mibairo $ 1.8 miriyoni muzvipo zvehunyanzvi - Potato Nhau
musha nhau Regions America
Dhipatimendi reAg rinopa mibairo yemamiriyoni gumi nemazana masere emadhora ekudyara zvirimwa
Nguva yekuverenga: 12min kuverenga
POCATELLO - Kufarira chirongwa cheIdaho State Dhipatimendi Rezvekurima chirongwa chegore negore chakakosha chirimwa chakakwira zvakanyanya gore rino zvichienzaniswa negore rapfuura.
ISDA yakazivisa kuti ichapa madhora miriyoni gumi nemasere emadhora gore rino kumapurojekiti gumi nemanomwe akasiyana ayo anobatsira varimi vezvirimwa muIdaho.
Mari iyi ichashandiswa kusimudzira, kushambadza nekuitisa tsvagiridzo yehurumende, mbesa dzakaoma, waini mazambiringa, hanyanisi, Cherry, apuro, hops nemaindasitiri enursery.
ISDA inopa mari gore rega rega kuburikidza nehurongwa hwayo hwekudyara block block, iyo inotsigirwa neUSDA.
Chirongwa ichi chakagadzirirwa kubatsira chete zvirimwa zvine hunyanzvi, zvinosanganisira miriwo, michero, nzungu dzemiti, michero yakaomeswa, zvirimwa zvekurima uye zvekurima.
ISDA yakagamuchira zvikumbiro makumi maviri nezvipfumbamwe zvehurongwa hwayo hwekudyara yezvivakwa gore rino, zvakapetwa zvakapetwa gumi nemashanu zvikumbiro zvavakagamuchira gore rapfuura. Zvakasanganiswa, zvikumbiro zvegore rino zvakatsvaga madhora zviuru mazana matatu nemamiriyoni matatu emadhora, mari inopfuura madhora zviuru zviviri zvemari yakatsvaga gore rapfuura.
ISDA yakabhadharira mapurojekiti gumi nematatu gore rakapera.
Kubva pakagadzwa chirongwa ichi muna2009, ISDA yakapa madhora anosvika mamirioni gumi nematanhatu kusvika pamakumi mapfumbamwe emapurojekiti akagadzirirwa kubatsira varimi vezvirimwa zveIdaho.
"Tinotenda nekuda kwemakore mazhinji atakakwanisa kufambisa chirongwa chakasiyana ichi chemari," akadaro ISDA Director Celia Gould. “Gore rino zvimwe rakatonyanya kukosha. Varimi vezvirimwa zvine hunyanzvi muIdaho vakasangana nematambudziko akakura, uye tinotarisira kuti nzira dzekudyara idzi muindasitiri dzichapa mibairo kwemakore anotevera. ”
Iwo ma grants abatsira mamwe ehurumende akasarudzika maindasitiri ezvirimwa, senge Idaho's waini mazambiringa indasitiri, kuti iwane mari yakawanda yekusimudzira, kushambadzira uye nekutsvagisa mapurojekiti izvo zvavangave vasina kukwanisa kuita.
"Tinovimba zvakanyanya nezvikwereti izvi kuti zvitibatsire nemabasa edu ekushambadza nekusimudzira waini yeIdaho," akadaro Idaho Wine Commission Executive Director Moya Shatz-Dolsby.
Komisheni yewaini gore rino ichagamuchira rubatsiro rwe $ 191,000 yekusimudzira waini yeIdaho uye nekuvandudza maonero ayo. Chipo chegore rino chinodiwa zvakanyanya kubvira Idaho waini indasitiri yekuratidzira chiitiko - Savor Idaho - chakamiswa nekuda kwecoronavirus kubuda.
"Tinotenda uye tinotenda nekugamuchira rubatsiro gore rino," akadaro Shatz-Dolsby.
Idaho Bean Commission yakagamuchirawo huwandu hwakawanda hwezvirimwa zvezvirimwa mumakore apfuura izvo zvakabatsira iyo kubhadhara mapurojekiti iyo neimwe nzira yaisingakwanise kubhadhara pairi $ 200,000 pagore bhajeti, akadaro Administrator weIBC Andi Woolf-Weibye.
Komisheni yebhinzi gore rino ichagamuchira mari inoita zviuru makumi mapfumbamwe zvemadhora iyo ichabatsira kubhadhara chirongwa chinotsvaga kuita ongororo yekukurumidza yekuongorora mamorekuru ayo anogona kubatsira varimi vebhinzi vakaoma kuti vakurumidze kupindura pazvirwere muzvirimwa zvavo.
Iyo purojekiti ichavandudza bvunzo dzehumwe hutachiona hosha dzebhinzi dzinogona kukonzera kurasikirwa kukuru kwegoho mukuputika kwakanyanya.
"Zvichienderana nenguva yegore, parizvino inogona kutora yakawanda inguva yekuyedza utachiona uhu," akadaro Woolf-Weibye. "Kugona kupindura nekukurumidza kuberekana kwezvirwere zvezvirimwa kwakakosha zvakanyanya kune varimi uye chirongwa ichi chine mukana wekubatsira kudzivirira kurasikirwa kwezvirimwa kwakabatana nezvimwe zvirwere zvehutachiona zvebhinzi."
Iyo Koreji yeIdaho yakapihwa iyo $ 87,000 mvumo yekuunganidza uye kuzivisa isiri-huchi nyuchi dzinotakura mukume kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero Idaho. Yunivhesiti ichashanda pamwe chete naCaldwell muridzi wemunda wemizambiringa Ron Bitner, anova zvakare nyanzvi yezvinyuchi.
Bitner akati kune mazana mashanu emazana asiri euchibein pollinator muIdaho uye idzi zvikuru vasingazivikanwe mapollinator vanogona kubatsira zvakanyanya zvimwe zvirimwa zvine pollination.
"Chirongwa ichi chinobatsira varimi kuti vanzwisise kuti vane pollination yemahara yakavapoteredza," akadaro Bitner.
Northwest Nazarene University ichagamuchira $ 132,000 rubatsiro yekubatsira yunivhesiti yeRobotics Vision Lab mukuyedza kwayo kugadzira michero yekukohwa marobhoti inozivikanwa seOrBot (Orchard Robot).
Zvinoenderana nechikumbiro ichi, "Chinangwa ndechekugadzira tekinoroji inotsigira varimi vemichero panguva yekukohwa, kunyanya nekushaikwa kwevashandi nekuwedzera mutengo webasa."
Boise State University ichagamuchira $ 107,000 rubatsiro rwechirongwa chinoyera E. coli mumidiridziro migero mukuyedza kubatsira Idaho varimi vezvirimwa vane hunyanzvi kutevedzera FDA's Produce Safety Rule.
Idaho Apple Commission yakapihwa mari inosvika zviuru zana nemakumi mashanu emadhora ekubatsira kubhadhara chirongwa chinotungamirwa nechirongwa cheYunivhesiti cheIdaho pomology kudzidza kugona kwekushandura minda mirefu yemapuro ikaita mipfupi, mizinga mizhinji iyo misoro yemiti inogona kusvikwa kubva ku pasi pevhu pasina kushandisa manera.
Komisheni yeapuro yakapihwawo mari inosvika zviuru makumi matanhatu nezvishanu zvemadhora ekuvaka ruzivo uye kudiwa kwemaapuro eIdaho kuburikidza nenhepfenyuro uye kushambadzira.
Idaho Cherry Commission ichagamuchira mari inosvika zviuru makumi maviri nezviviri zvemadhora ekuwedzera kutengesa kwecheri yeIdaho kuburikidza nekushambadzira kwechitoro uye mashandisiro enhau.
UNODA nhau dzenharaunda here? Tora Nhau Yemunharaunda Misoro mubhokisi rako rekunyora zuva nezuva.
Ehe! Sanganisira chakakosha kupa & kukwikwidza kuzivisa maemail
Idaho-Eastern Oregon Onion Committee yakapihwa mari inosvika $ 134,000 yekubatsira kutsigira chirongwa neYunivhesiti yeIdaho neOregon State University iyo inotsvaga kugadzira marongero akabatanidzwa ekurapa chirwere chepink midzi chirwere muhanyanisi.
Iyo Idaho-Eastern Oregon nzvimbo ndiyo nyika hombe muhombe kuburitsa hanyanisi inogadzira nharaunda uye pink midzi ndicho chirwere chinotyisa kwazvo cheeanisi munzvimbo ye Treasure Valley. Iripo mumakumi masere neshanu muzana eminda yeeiii imomo uye inokwanisa kukonzera kurasikirwa kwezvirimwa zvinosvika makumi mashanu muzana.
Komiti yeonikisi yakapihwawo mari inosvika zviuru gumi nezviviri zvemadhora yekuwedzera ruzivo nekutengesa kwemaonion eIdaho-Eastern Oregon mumisika yepasi rose neyekunze.
Idaho Hop Growers Association ichagamuchira mari inosvika zviuru makumi mana zvemadhora kune chirongwa chemakore maviri chakagadzirirwa kuzivisa vanhu nezveIdaho hops kuburikidza nekushanya kwezhizha, venhau venhau uye matsamba enhau.
Idaho anoverengera Nha. 2 mukugadzira hop muUnited States.
ISDA ichapa Idaho Nursery uye Landscape Association mari inosvika $ 135,000 yekubatsira kubhadhara chirongwa chakabatana neYunivhesiti yeIdaho iyo inotsvaga kugadzira zvigadzirwa zvitsva uye zvepamusoro-zvinochengetedza mvura zvirimwa zvemunyika. Iyo purojekiti inobatsira zvakare nekuparadzira uye kushambadzira kweizvi zvitsva-chizvarwa chizvarwa chemiti yezvirimwa.
Isda's Idaho Yakasarudzika chirongwa ichagamuchira $ 164,000 rubatsiro kushambadzira Idaho hunyanzvi zvirimwa kuburikidza nekushandisa kushambadza, zvemagariro midhiya, veruzhinji hukama uye kushambadzira kushambadzira.
Yunivhesiti yeIdaho ichagamuchira mari inosvika zviuru mazana matatu nemakumi masere neshanu yekuvandudza nzira dzekutarisa dzechirwere kuchengetedza hutano hwevhu mu mbatatari muIdaho. Mbatatisi ndiyo nhamba 139,000 chirimwa muIdaho maererano neyakaenzana mapurazi-gedhi mareti uye Idaho ndiyo nyika yepamusoro inogadzira mbatatisi.
Sekureva kwechikumbiro chemari iyi, utachiona hunokuvadza mbatatisi inogara iri tyisidziro kuma spud uye manejimendi ezvirwere zvinotakurwa nevhu zvinogona kuverengerana zvinodarika gumi muzana yemitengo yevarimi vembatatisi.
Idaho Potato Commission yakapihwa mari inosvika zviuru zana nemakumi matatu emadhora ekubatsira kutanga zvirongwa zvekutengesa muUnited Kingdom. Iwo mapurogiramu akagadzirirwa kuwedzera asina mvura yeembatatari kunze kwenyika kuUK
Sekureva kwechikumbiro cheiyo rubatsiro, "Sampling uye mamwe mapurogiramu ekushambadzira nemabasa anozogadziridzwa kuwedzera ruzivo rwevatengi nezvezvinhu zvisina mvura zvinobva kuIdaho. … Chigadzirwa chakabviswa mvura muIdaho chakasiyana zvikuru nemafuta emuno akabuda muUK Zvitendero zveIPC kuti kuburikidza nezviitiko zvekuenzanisira, tinokwanisa kushandura maonero evatengi emapatata akasvinwa uye kuwedzera kudyiwa kwezvigadzirwa zveIdaho. ”
Idaho State University yakapihwa mubairo we $ 98,000 yekuitisa miedzo yemunda kune otomatiki mwaka wemazamu utachiona hweY yekuona system. Vatsvakurudzi veIUU vachashandisa masisitimu enendege asina kurongwa akashongedzerwa neinjiniya yakakosha kuti vaone uye mepu yemiti yePVY ine hutachiona. Chinangwa chekupedzisira kugadzira nzira yakaderera-mutengo kune varimi kuti vakurumidze kuona uye kudzikisira PVY.
Iyo Snake River Seed Cooperative yakapihwa mari inosvika zviuru gumi zvemadhora yekubatsira kubhadhara chirongwa chakagadzirirwa kuwedzera kudzoka kweupfumi hwekudyarwa kwembeu yezvirimwa nekuwana maturusi akakwidziridzwa ekuchenesa mbeu nekuedza kumera. SRSC iboka revarimi makumi matatu nevatatu vanogadzira mbeu dzemuno dzinoiswa mumapaketi ebindu uye dzinotengeswa muzvitoro zvinotengesa dunhu. Mbeu zhinji dzinotengeswa kuvarimi vekumashure apo dzimwe dzinotengwa nevarimi vadiki.
Chirongwa ichocho, maererano nechikumbiro chakapihwa, chinotsvaga kugonesa varimi ivavo "kuti varambe vachizadzisa chinodikanwa chiri kukura chembeu dzakasimwa dzakasimwa mudunhu."
Tags: mari yezvirimwa
“Zvimwe Alternaria?” Tora zvakare-kunzi '
Mbatatari inoguma mumukombe wekutsveta panzvimbo peye mufry
Alarm yevarimi - coronavirus kurambidzwa kweH-2A vashanyi vashanyi
Pfungwa huru, sainzi uye kuzvipira, makore makumi mashanu ekushandurwa kwekuvandudza
Nzira ina Dzemamwe mapurogiramu ekuberekesa CGIAR anogona kufamba hurukuro pazvinhu zvitsva
Peru: Zvekurima zvinoda dzimwe nzvimbo uye kugadzira mbatatisi